रोटरडैममा कुिपमा मार्को बोर्सोटोको उत्कृष्ट कन्सर्ट! मार्टिन भिजल्याण्ड
रोटरडैममा कुिपमा मार्को बोर्सोटोको उत्कृष्ट कन्सर्ट!
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	31 मई 2019 मा	•3टिप्पणिहरु
म त्यहाँ त्यहाँ छु, तर यो रिपोर्ट गर्नु पर्छ: मीडिया कल डे कूप मा मार्को बोर्सोटो द्वारा उत्कृष्ट कन्सर्ट देखि भरा भयो। आज सबै ठूला नामहरू त्यहाँ थिए: डेभिना मिशेल, म्यान, एन्ड्रेज हजेस, लिल 'क्लीन, आर्मिन वान बर्न र सायद म केही थप बिर्सनेछ। किन यो उल्लेख हुनुपर्छ? किनकि यसले रोटी र खेलको अवधारणाको वरिपरि घेरिएको छ र कतिपय दशैंका हजारौं मानिसहरू जेलभित्र पर्खाल भइरहेको बेला कसरी मनाउने व्यस्त छन् भनेर हेर्न मनपर्छ। यद्यपि, अधिकांशले यो जेलको पर्खालका रूपमा अनुभव गर्दैन, किनभने तिनीहरू मेसनको टोली, सप्लायर, प्रबन्धक वा नयाँ जेलको गार्डको अंश हुन्। यो कुनै अदृश्य जेल बिना शारीरिक पत्थरों र दृश्यात्मक सलाखों को बिना र यसैले कुनै पनि मुश्किल देखि यो देख्न सक्छ। त्यो यति नकारात्मक छ र हामी नकारात्मकता संग संक्रमित हुन चाहँदैनौं।
तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ: यदि मार्को बार्सो जानबूझेर डेभिना मिशेलको माध्यमबाट ट्रान्सगेंडर प्रचारमा भाग लिनुभयो (हेर्नुहोस् यो लेख), उसले अझै पनि आफ्नो कामको गर्व गर्दथ्यो र मोटो भरिएको भरिएको बैंक खातासँग धेरै खुसी हुन्थ्यो, जान्दिन कि उनीहरूका छोराछोरीले केही वर्षमा यौन परिवर्तनको छनौट गर्न सक्छन्? अफगानिस्तानको मालिक जॉन डे मोल हो, आफ्नो बैंक खातामा ती बिलियनहरूसँग खुसी हुन्थे वा उनी रातमा पसीरहेका छन् जब उनी सोचेका छन् कि उनी पीकेओपी नकली समाचार उत्पादनका लागि जिम्मेवार छन्? के हामी केही वर्षहरूमा खुशी हुनौं किनकि हामी कुलपन्थी नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत बस्छौँ? त्यस समयमा, तथापि, तपाइँसँग अब यो विचार गर्न सक्षम हुन मनको स्वतन्त्रता (साँच्चिकै, तपाईंको मस्तिष्क अनलाइन छ) छैन।
तपाइँ अब तपाईंको आँखा बन्द गर्न आवश्यक छैन। तपाईंले पनि आशा गर्नुपर्दैन कि ट्रममन शो भवनहरू अचानक भविष्यमा तपाईंको अगाडी राम्रो हुनेछ। तिनीहरू क्लाउडबाट नियन्त्रण गरिएको विश्व जनसंख्याको कुल नियन्त्रण चाहन्छन्। त्यसैले तपाईलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ! पढ्नुहोस् यहाँ तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ.
स्रोत लिङ्क सूची: imdb.com
ट्याग: 2019, एन्ड्रे हजेस, ANP, अर्मिन वान बर्न, कन्सर्ट, डेभिना मिशेल, विशेष, जॉन डे mol, काकपिट, Lil 'Kleine, म्यान, रोट्टरड्याम
31 मई 2019 मा 22: 33
सच्चा मानिसबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश देखाउनु भनेको तपाईंले आउँदो ढोकाको डर हटाउनु पर्छ। फिल्मको अन्त्यमा उहाँ पर्खालमा आउनुभयो जुन उसले स्वतन्त्र हुन मानेको छ। एक पल्ट शीर्षमा उसले (कृत्रिम) प्रकाशबाट अँध्यारो प्रवेश गर्नुपर्छ। तपाईलाई पहिलो पटक अँध्यारोमा जानको लागि वास्तविक लाइटमा जानुहोस्।
यो सत्य राम्रो लाग्यो जस्तो लाग्छ कि हामी बिस्तारै हिउँ पर्खालमा चढ्दैछौँ जुन हाम्रो पृथ्वी को अन्य 33 महाद्वीपहरु को खोज गर्न को लागी। त्यहाँ एक समस्या छ कि तपाई अझै अझै नै एउटै मानव भौतिक स्थितिमा हुनुहुन्छ जुन तपाईसँग छ। यो फ्लैट पृथ्वी सिद्धान्तको जाल हो, यो अझै पनि तपाई मा रहेको छ राज्यमा फंसिएको छ।
म त्यहाँ एक मात्र तरिका हो र त्यो मृत्यु (भय) मार्फत छ जस्तो लाग्छ।
हामी यसको बारेमा धेरै लामो सोच्न चाहँदैनौं, त्यसैले यो राम्ररी राम्रो छ कि पार्टी नियमित रूपमा व्यवस्थित हुन्छ।
आज रातो रातो छ
1 जून 2019 मा 01: 53
फ्लैट पृथ्वी सिद्धान्त कुचल (निचो) आयामको गलत भ्रष्ट (अपरिवर्तित) हो जसमा हामी (सोच्नुहोस्) हामी बस्ने छौं। बिन्दु यो छ कि हामी पत्ता लगाउँछौं कि हामी लूसफेरियन सिमुलेशनमा बस्छौं (कम आयाम)।
1 जून 2019 मा 01: 54
जहाँ "जीवन" सही शब्द होइन। हामी (बहु खेलाडी) सिमुलेसन देख्छौं र आत्माको साथमा (हाम्रो साथ बुझ्ने र खेल्ने) हातमा नियन्त्रणकर्तासँग छ।
« माइकल पी। थिज एच। जोस। सबै मिडियाको हत्याका कारण सबैले हानिकारक कानूनको चाँडो परिचय लिन्छ
थियज एच। पीएसओपी प्रोफेशनल सेक्रेटरीलाई कमजोर पार्नु भएको छ र पहिले नै हासिल भएको छ »
कुल भ्रमण: 4.140.788